[27 / 02 / 2020] Qof walbaa wuu ku qoslayaa Subwaydan	1 America
Maalinta: 10-ka July, 2019
Balıkesir, Soma, Bandırma iyo Xeryaha Shaqaalaha ee Nazilli Dayactirka iyo Dayactirka Tender Republic of Railways State 3. 2019 / 274858 GCC qiimaha xaddidan ee Adeegga Iibsiga Gobollada iyo Maareynta Adeegga Maaraynta Kaydka (TCDD) [More ...]
Burcad-badeedda Burcad-badeedda ayaa la furay
Wakiillada waaxda mishiinada Bursa waxay kaqaybqaateen shirar ganacsi oo laba geesood ah oo ka dhacay Malaysiya iyo Indonisiya oo ku saabsan baaxadda barnaamijka Wareejinta Wershadaha Wershadaha Mashiinka oo ay soo qaban qaabisay Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha BursO (BTSO) iyadoo la kaashanayo Wasaaradda Ganacsiga. BTSO, xubno [More ...]
Shanlıurfa waxay gaadhay jidad casri ah
Iyada oo la raacayo tilmaamaha Duqa Magaalada Zeynel Abidin Beyazgül, Dowladda Hoose ee Magaalada ayaa dardar gelisay dhismaha wadooyinka iyo boulevards. Muwaadiniintu waxay uga mahadcelinayaan Madaxweyne Beyazgül iyo kooxdiisa shaqadooda adag [More ...]
Mersin Qorshaha Gaadiidka Gaadiidka ee 5 Kala Hadlay
Degmada Mersin waxay isku keentaa dhamaan daneeyayaasha magaalada ee kuyaala siminaaro ku lug leh baaxadda qorshaha Istaraatiijiyada Qorsheynta. Xuduudahan, Waaxda Gaadiidka ee Magaalo-madaxda, Gaadiidka ku jira qaabka diyaarinta Qorshaha Istaraatiijiga ee 2020-2024 [More ...]
Takoorka kudhexeeya Teleferik Alanya
Alanya Alanya Teleferik ee 'Alanya' 10 TL 'ee ku taal Alanya, waqtigan ayaa soo jiidatay jawaabta madaxweynaha iyo xubnaha jaaliyadaha. Inkasta oo jawaab-celinta ka timaada qaybaha kala duwan ee bulshada ay kor u qaadaan qulqulka, haddana degmadu weli way iska aamusantahay. [More ...]
Hawlgallada Muujinta ee IisT Drivers?
Midowga Adeegga, İş Dirawallada IETT, ayaa sheegay in aragtida howlgalka, ay yiraahdeen, "Farsamooyinku waxay keenaan fashil sida haddii darawalka sameynayo ama wax u dhimaya aragtida abuuritaanka aragtida ma aha akhlaaq." Laga sameeyay midowga [More ...]
taas oo harbinger ah ee isbadal weyn ee dunida iyo gaadiidka goboleedka la sifaatka aad u sareeya bilaabay in ay drive imtixaanka dal oo kala duwan, inuu tallaabooyinkiisa injineernimada Tuuri Turkey mahad ayaa gaadhay heer in lagu baaro. AVL Cilmi baarista iyo [More ...]
Vivarail's beddelay tareenka 320 xarigga iyo nidaamka lacag-celinta degdega ah wuxuu ku guuleystay Abaalmarinta Bay'adda Ganacsiga Tiknoolajiyada Tareenka. Vivarail, waa shirkad warshadeed oo wayn, ayaa ku faani doonta in loo yaqaano shaqadeeda. Vivarail kaliya [More ...]
Cali Yhsan Uygun, oo ah Agaasimaha Guud ee TCDD, ayaa loo doortay madaxweyne ku-xigeenka Wakiilada Caalamiga ah ee Railways (UIC) waxaana markan loo doortay Madaxweynaha UIC-RAME (Guddiga Bariga Dhexe). Kulanka UIC ee 23.RAME waxaa lagu qaban doonaa 5-6 July 2019 [More ...]
Gawaarida Gawaarida Gawaarida ee Alanya ayaa ku dhammaaday
Dowlada Hoose ee Antalya, roobka qaboobaha iyo dhulbaxayaasha kadib roobab xad dhaaf ah oo ka da’ay wadada xeebta ee Alanya Gazipaşa Aysultan Women Beach waxay bilaabeen inay dayactir kusameeyaan. Digniinta muwaadiniinta isticmaalaya wadada [More ...]
shirwaynaha duulista Turkey ee Istanbul garoonka diyaaradaha waday 3. shaqada wadooyinka orodka ayaa si xawli ah u socota. 2020 waxaa loo qorsheeyay in la galiyo qeybta hore ee 3. Gegada dayuuradaha ee Istanbul oo leh waddo-orod madax-bannaan, is-barbar-socod madax-bannaan oo leh tirada wadooyin-orodka [More ...]
Socodka dadka lugeeya ee Ankara
Dawladda Hoose ee Magaalada Ankara, bilicda magaalada iyo sidoo kale shaqooyinka ay muwaaddiniintu u isticmaalaan safka hore ee waxqabadka waddooyinka iyo isgoysyada ayaa midba mid lagu dhaqmayaa. Gaadiidka caasimada, labadaba wadayaasha iyo dadka lugeeyaba [More ...]
Buca Metro 18 waa sugitaanka oggolaanshaha laga bilaabo Ankara
Magaalada Boosaaso, oo saddex codsi oo rasmi ah u dirtay Madaxtooyada ee barnaamijka maalgashiga ee Buca Metro, mashruuca gaadiidka dadweynaha ee mudnaanta leh ee Izmir, ayaa sugaya jawaab ka timid Ankara. Maalgashiga Buca Metro oo neefsanaya Buca [More ...]
RayHaber 10.07.2019 Warbixinta Shirka
Qalabka Dayactirka Gawaarida ee YHT Xarumaha Qalabka Caawimaadda Gawaarida